Isibonelo sokukala ikhwalithi ye-Free Software - Geofumadas
Model ukukala izinga Khulula Thwebula uhlelokusebenza
Meyi, 2009 Geospatial - GIS, I-GvSIG, Innovations, qgis
Le dokhumenti yanyatheliswa esikhathini esingeside esedlule nguMnyango Izinqubo kanye Systems eNyuvesi USimon Bolivar kanye National Telecommunications iKhomishana Venezuela CONATEL, ngafunda kanye lokhu kumiselwa ngezindaba inethiwekhi kulelo zwe ngokuthi Geomatics khulula futhi ngempela kuyinto ugqozi ezithakazelisayo njengoba umbhangqwana kuya susa ushizi kunoma ubani.
Inhloso yale dokhumenti ukwethula iqoqo izinga izici ukuhlola Khulula Thwebula uhlelokusebenza GIS isicelo ngaphansi ISO /-IEC ejwayelekile 9126 nekhwalithi imodeli Dromey ingashintshwa ngaphasi kwehlelo waqamba njengoba FLY.
Isistimu yokulinganisa ibukeza izici ezifana nokusebenza, ukuphatheka nokugcinwa kwezinga ngaphakathi kwamazinga amane okuhlaziywa:
I-1. Ukulinganisa (izici zangaphakathi, izimo zenqubo, izici zangaphakathi nezimo zomkhiqizo nezici zangaphakathi nezimo zombono womuntu)
I-2. Izigaba (Lezi yi-14 ezihlotshaniswa nobukhulu obuthathu okukhulunywe ngenhla)
Udaba kuba, kukhona ezithakazelisayo kanye nesipiliyoni uqobo njengoba ngaphandle temdzabu okukhona Venezuela maqondana ngokwepolitiki socialism okuyinto ezithakazelisayo umthombo udaba evulekile (ezifana ashukumisayo Nobumhlophe gvSIG e uhlu ukusatshalaliswa), kanye nomthethosisekelo ukuze kusukela ku-2004 izimo zikahulumeni zisuke zithuthela ifomu elincane ngokuqondene nesofthiwe yamahhala. Lo mkhuba usuvele ubonakala emazweni amaningana eNingizimu Melika ukuthi ngemali kusho ukutshalwa kwezimali okukhulu okwamanje okuzinikezelwe kwisofthiwe yokuthengisa noma ukwephulwa kwe-copyright.
Ngincoma ukuba ubuke idokhumenti, ngoba ingasetshenziswa amanye amazwe noma izikhungo. Ngaphandle kokusungulwa kanye neziphetho, umongo ngesimo sangemuva ufakiwe, indlela elandelwe, isiphakamiso semodeli yekhwalithi kanye nesifundo socwaningo nemiphumela yaso sibhaliwe. Nakuba icala lokusebenzisa le dokhumenti lenziwe ngamathuluzi weGrey, i-Qgis neThuban, inqubo ingashintshwa kwezinye izindlela ezinye izono zabo hhayi ukuthandwa.
Bona idokhumenti jikelele
Bona idokhumenti efakwe ku-GIS.
Thumela Previous«Langaphambilini Inkinga 1: I-Acer Aspire One: umsindo uvalekile
Post Next i-gvSIG 1.9 ne-2.0 igxile ngoJulayi noSeptembaOlandelayo "
Impendulo eyodwa ku- "Isibonelo sokukala ikhwalithi ye-Free Software"
ngingatholaphi ikhasi elikhuluma kuphela ngesimodeli sekhwalithi ye-dromey ????